Umaki: wpml | Martech Zone
I-ejensi yami isebenza ngokusiza inkampani ehlobene nokunakekelwa kwezempilo ngezilimi ezimbili ukwakha isayithi yabo, ikwenze kube ngcono ukusesha, futhi ithuthukise ukuxhumana kwezokukhangisa namakhasimende abo. Ngenkathi benesayithi elihle le-WordPress, abantu abalakhele bancike ekuhumusheni komshini kwezivakashi ezikhuluma iSpanishi. Kunezinselelo ezintathu ngokuhunyushwa komshini wesayithi, noma kunjalo: I-Dialect - Ukuhunyushwa komshini waseSpain akuzange kubhekele ulimi lwesigodi lwaseMexico lwezivakashi zalo. Amagama
I-WPML iyindinganiso embonini yokwakha nokuhumusha okuqukethwe kwakho kusayithi le-WordPress elinezilimi eziningi. Njengamanje ngisebenzisa i-plugin ye-GTranslate Martech Zone ukuze wenze ukuhumusha komshini olula, nobuliminingi. Lokhu kwandise ukufinyelela kwethu emhlabeni jikelele kanye nokuqhutshwa kwenjini yokusesha okuya kusayithi lami. Sisebenza ekuthumeleni isiza seklayenti njengamanje esinabantu abaningi baseSpain. Ngenkathi i-plugin efana neGTranslate ingakwazi